सबैभन्दा कान्छा रोमेरो उर्फ अर्जेन्टिनाका ‘मेक्सिकन मेस्सी’ - NA MediaNA Mediaसबैभन्दा कान्छा रोमेरो उर्फ अर्जेन्टिनाका ‘मेक्सिकन मेस्सी’ - NA Media
सबैभन्दा कान्छा रोमेरो उर्फ अर्जेन्टिनाका ‘मेक्सिकन मेस्सी’
छोटो कद, लामो कपाल, अर्जेन्टिनाको सेतो र निलो धर्के जर्सी, बायाँ खुट्टाले बलमा राम्रो नियन्त्रण अनि अगाडी आएका डिफेन्डरलाई एकपछि अर्को गर्दै छलाएर अगाडी बढ्ने शैली । युवा अवस्थामा लिओनेल मेस्सीको यस्तै शैलीले विपक्षी र समर्थकमाझ छाप बसाएको थियो । तर यसपटक उक्त खेलाडी लिओनेल मेस्सी थिएनन् ।उनी लुका रोमेरो हुन् ।
१५ वर्षीय रोमेरो जसलाई कलिलो उमेरमा नै खेल्ने शैली मात्र नभएर शारीरिक बनोट हेर्दा पनि लिओनेल मेस्सीसँग दाँज्न थालिएको छ । अर्जेन्टिनाका समर्थक उनले लामो समयसम्म राष्ट्रिय टोलीमा प्रभाव छाड्ने आशासहित उनलाई हेर्न थालेका छन् । उनको प्रदर्शन हेर्दा अहिले नै सिनियर टोलीको फुटबलमा उनले खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
यससँगै उनले सेल्टा भिगोका डिफेन्डर सान्सोनको नाममा रहेको ८० वर्ष पूरा किर्तिमान पनि कायम गरे । मोरेनोले रियल म्याड्रिडविरुद्ध खेल्दै १५ वर्ष २ सय १९ दिनको उमेरमा ला लिगामा डेब्यु गरे । सान्सोनले सन् १९३९-४० सिजनमा १५ वर्ष २ सय ५५ दिनको उमेरमा डेब्यु गरेका थिए ।
त्यसको दुई वर्षपछि बार्सिलोनासँग जोडिएको अर्को घटना अगाडी आयो । इबिजाको बीचमा लुका र बार्सिलोनाका पूर्व खेलाडी ड्यानी आल्भेस फुटबल जगल गरिरहेको देखिएको थियो । आल्भेस आफैं लुका खेलिरहेको ठाउँमा आएर खेल्न चाहेका थिए । फोटो खिच्न जम्मा भएको भिडलाई उनले आफ्नो तस्बिर नभएर ‘भविष्यका लिओनेल मेस्सी’ का रुपमा चिनारी दिँदै लुकाको तस्बिर लिन भनेका थिए ।
Gallery image with caption: रोनाल्डो र मेस्सीले साउदी अरेबियाको करोडौंको प्रस्ताव अस्वीकार गरे
Gallery image with caption: आर्सनल एफए कपबाट बाहिर
Gallery image with caption: नेपाली चेली पुष्पाले बङ्गलादेशमा जितिन् म्याराथनमा स्वर्ण
Gallery image with caption: रोनाल्डोले पेलेको कीर्तिमान तोडे
Gallery image with caption: नेपाली क्लबले एएफसीका कुनै प्रतियोगिता खेल्न नपाउने !
Gallery image with caption: मेस्सीको रेकर्डमा रोनाल्डोको हमला !
Gallery image with caption: बिश्व फुटबलमा चर्चित देशहरुको ‘निकनेम’ र त्यसको कारण
Gallery image with caption: नेपाल का सन्दिप मात्र होइन,आईपीएल मा यी खेलाडीहरु ले समेत खेल्ने मौका पाएनन्
सरकार संविधान संशोधनको अन्तिम तयारीमा
मध्यपूर्व लगायत विकसित देशमा नेपाली नर्सको माग,काममा दक्ष भाषामा समस्या